Safiirka jabuuti ee Somaliland fadhiya oo sheegay Waxtar aay u gaystaan dadka Reer Jabuuti ee Degan Somaliland | Biyoguurenews.com
Home Wararka Safiirka jabuuti ee Somaliland fadhiya oo sheegay Waxtar aay u gaystaan dadka...
Safiirka jabuuti ee Somaliland fadhiya oo sheegay Waxtar aay u gaystaan dadka Reer Jabuuti ee Degan Somaliland
Xafiiska Qunsuliyada dalka Jabuuti ee Hargeysa ayaa shaaca ka qaaday inay balaadhin doonaan adeegyada ay u qabtaan muwaadiniinta Jabuuti iyo kuwa Somaliland.
Amb Xuseen Cumar(Kawaaleeye) oo manta warbaahinta maxaliga ah xafiiskiisa ugu waramay ayaa faahfaahin ka bixiyey adeegyo kala duwan oo ay qabteen sannadkii dhamaaday, waxaanu yidhi.
Waxaan u samaynay 53 dhalasho sannadkii dhamaaday, iyo caddaynta qofka ku dhasha Somaliland ooh ore aan u haysan goob ay ugu hagaagaan ayaa madaxweynaha Jabuuti Md Ismaaciil C Geele ugu sameeyey xafiiskan in muwaadiniinta Jabuuti xaqooda u helaan, waxaan caddaynay labaatan qof oo ku dhintay geyiga Somaliland (Ilaahay ha u naxariistee).
Md Kawaaleeye ayaa sheegayin adeegyada xafiisku u qabto jaaliyada reer Jabuuti ka mid yihiin caddeynta dadka isku guursada Somaliland shahaadada meherkooda, dadka baasaboorku ka dhaco oo la siiyo warqad ay ku dhoofaan, sidoo kalena waalidka u doonaya caddeymaha caruurtooda u sameeyaan.
Previous articleMuxuu salka ku hayaa muranka u dhaxeeya xildhibaan Muno Key iyo Booliska Soomaaliya
Next articleTirada dadka ku dhintay weerarkii Nairobi oo korortay